Ny doka rohy lahatsoratra dia mandika ny Google Adsense (ao amin'ny bilaogiko) | Martech Zone
Talata, Jolay 3, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Google Adsense no fitaovana voalohany amin'ny fidiram-bola amin'ny bilaogiko hatramin'ny nanombohany. Izaho koa manana Commission Junction dokambarotra ao anaty RSS RSS-ko, Kontera dokambarotra mifototra amin'ny lahatsoratro, ary Doka Rohy an-tsoratra. Izaho koa dia manao Review amin'ny alalàn'ny Avereno jerena aho ary mahazo ihany koa indraindray Starbucks fanomezana amin'ny alàlan'ny PayPal. Whew!
Amin'ny volana tsara dia mety hamoaka 300 $ aho, lavitra ny $ 10k + an'i John Chow misintona, fa mbola hajaina araka ny hevitro. Ho hitanao fa madio ny pejin-tranoko amin'ny doka rehetra. Azoko atao ny mametraka doka eny rehetra eny, saingy tsy te-hanery ny dokam-barotra amin'ireo mpitsidika miverimberina ao amin'ny tranokalako aho. Fa kosa, mampiasa ny doka ho an'ny olona izay sendra mahita ahy ankolaka aho, amin'ny alàlan'ny fikarohana sy andinin-tsoratra.
Google Adsense no loharanom-bola lehibe hatreto… hatreto. Doka Rohy an-tsoratra na izany aza dia nanaparitaka tamin'ny fomba ofisialy ny fidiram-bolako Google Adsense. Tamin'ny volana Mey, nahazo dolara roa aho. Tamin'ny volana Jona dia nifanena tamin'ny vola azo teo ho eo izay nomen'i Adsense aho - saingy tsy nanana aho Google Adsense nohatsaraina. Saingy amin'ny volana jolay, mijoro aho hitondra eo ho eo avo roa heny amin'ny Ads Link Ads fa tsy amin'ny Adsense. Wow.
Hevitra ato Anatiny Doka Rohy an-tsoratra ny fahombiazana dia namboarina ho an'ny bilaogy fa tsy tranokala. Manome plugin ho an'ny mpampiasa WordPress aza izy ireo mba hahamora kokoa azy io. Ireo mpanao dokam-barotra dia afaka mividy 'lahatsoratra' fa tsy teny. Fahafinaretana tsy mampino izany, na ho an'ny bilaogera na ho an'ny mpanao doka. Raha manoratra lahatsoratra amin'ny lohahevitra iray ianao, tsy mahafinaritra ve ny ahafahanao mividy lohahevitra fantatrao fa manohana ny vokatrao? Fahafahana mahafinaritra.
WordPress: Famaritana Meta Dynamic isaky ny Paositra